माउथवासले कोरोनाभाइरसलाई ३० सेकेन्डभित्रै नष्ट पारिदिने | Citizen FM 97.5 Mhz
माउथवासको सम्पर्कमा आएको ३० सेकेन्ड भित्रै कोरोनाभाइरस नष्ट हुने तथ्य वैज्ञानिकहरुले फेला पारेका छन् । प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धानमा सो कुरा पत्ता लागेको हो । माउथवास कोरोनाभाइरस नष्ट गर्न निकै प्रभावकारी हुने कुरा कार्डिफ युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले फेला परेका हुन् । बेलायतको वेल्समा रहेको युनिभर्सिटीको अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिड–१९ का बिरामीमाथि गरिएको क्लिनिकल ट्रायलपश्चात् यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो ।
डा. निक क्लेडनले यो अनुसन्धानपश्चात् माउथवास अब मानिसहरुको दैनिक रुटिनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने अनुमान गरेका छन् । र्‍यालमा भएको भाइरसलाई माउथवासले मार्न सक्ने कुरा अनुसन्धानले बताएपनि यो कोरोनाभाइरसको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने कुरामा कुनै प्रमाण भने भेटिएको छैन । किनभने माउथवास श्वासनली र फोक्सोसम्म पुग्न सक्दैन ।
युनिभर्सिटीको रिपोर्टमाप्रकाशित जानकारी अनुसार ०.०७ प्रतिशत सेटिपिरिडिनियम क्लोराइड (सीपीसी) भएको माउथवासले भाइरसलाई नष्ट गर्न निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । रिपोर्टलाई सहकर्मीहरुले समीक्षा गर्न बाँकी नै भएपनि यसले भर्खरै गरिएको एक अनुसन्धानलाई समर्थन गरेको छ । उक्त अनुसन्धानमा माउथवासले भाइरल लोडलाई कम गर्न सहयोग गर्ने बताएको थियो ।
‘यो अनुसन्धानलाई अन्य वैज्ञानिकले समीक्षा गरिसकेका छैनन् जुन कुनै पनि शैक्षिक अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसलाई अब जर्नलमा प्रकाशित गर्न दिइएको छ ।’ ‘सर्वसाधारणले बेलायतको सरकारले जारी गरेको दिशानिर्देशको पलना गर्न आवश्यक छ । उनीहरुले आफ्नो हात बारम्बार धोइरहनुपर्छ भने सामाजिक दुरीको पनि पालना गर्नुपर्छ ।’
२४ घण्टामा विश्वमा ९ हजार २२० संक्रमितको मृत्यु
लोकदोहोरी गीत ए मेरो हजुरमा दुर्गेश थापा कृष्ण बनेपछि भाइरल
बाबुराम भट्टराई भन्छन : प्रधानमन्त्री ओलीले पदत्याग गर्नु उपयुक्त हुन्छ
नेपाल छिट्टै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदै छ : प्रधानमन्‍त्री केपी ओली
कक्षा १२ को विद्यार्थीले मोवाइल हेर्दै चिट चोरेको परीक्षा लेखिरहेको भिडियो भाइरल
प्रकाश सपुतको “फुटेका चुरा” आउँदै यस्तो बन्यो पोस्टर !
असल जीवनसाथि खोज्दै हुनुहुन्छ , थाहा पाउनुहोला सम्बन्ध…